अर्जै उच्च मा.वि मा राजनिति छिरेपछि… – Gulmiews
अर्जै उच्च मा.वि मा राजनिति छिरेपछि…
No comments	बुटवल, जेठ २३ । गुल्मी जिल्लाको अर्जै उच्च मा.वि. मा राजनितीले उग्र रुप लिएपछि शिक्षकहरु बीच नै हात हालाहाल भएको छ ।
भनिन्छ, विद्यालय शिक्षाको ज्योति दिने ठाउँ हो । तर अर्जै उच्च मा.वि मा कार्यरत शिक्षकहरुले आफ्नो पदिय दायित्व विर्सदै पाटीको झण्डा बोकेर हिड्न लागेपछि विद्यालयले नै यतिबेला अस्त व्यस्त भएको छ । महिना दिनमा नै प्र.अको राजिनामा आउने विद्यालयमा पछिल्लो एक साता अघि शिक्षकहरु बीच कुटपिट भएको घटना सार्वजनिक भए सँगै विद्यालयको यथार्थ बाहिर आएको छ ।
जेठ १२ गते विद्यालय समयमा बैद्य माओवादी निकट मानिने शिक्षक जोरासिंह पुनले विद्यालयमा मादक पर्दाथ सेवन गरी प्र.अ कमल प्रसाद अर्याललाई अपच शव्द प्रयोग गर्दै बेईजेति गरेको स्रोतले बताएको छ । तर यो कुरा भने शिक्षक पुन पक्षले स्वीकार गर्ने पक्षमा भने देखिएको छैन । काँग्रेस, एमाले शिक्षकहरु एक पक्षमा उभिएका छन् भने एमाओवादी र बैद्य माओवादी शिक्षकहरु अर्को पक्षमा उभिएका छन् ।
जेठ १२ गते शिक्षक जोरा पुनले प्र.अ को कार्यकक्षमा पुगि गुप्ताङग देखाएको आरोप काँग्रेस, एमाले निकट मानिने शिक्षकहरुको दावी छ । “अर्मादित कार्य जोरासरले गरेका हुन” स्रोत भन्छ“ शिक्षक धनिश्वर अर्याल र शिक्षक पदम पाण्डेलाई जोरासरले हानेर उनी भागे ।”
शिक्षक जोरासिंह पुनलाई केही शिक्षकहरु मिलि पिल्लरमा बानेर पिटेको बुझिएको छ । “पदमको रगत देखिएर पिटेको प्रमाणित भयो, तर जोरासिंहलाई पनि पिल्लरमा बानेर पिटिएको हो, तर उनलाई चोट लागेन र प्रमाण पनि भएन” स्रोतले भन्यो ।
प्रत्यदर्शीका अनुसार जोरासरलाई पिल्लरमा बाधेको बताएका छन् । “म जाँदा पिल्लरमा बाधिएको थियो, हामीले यसो गर्न हुन्न भन्यौ” नाम नभन्ने सर्तमा प्रत्यदर्शिले भने ।
पदम पाण्डेलाई जोरासिंहले आखामा चोट लाग्ने गरि मुक्का प्रहार गरेको बुझिएको छ । रुकुम जिल्ला स्याल पाखा गाविसका जोरासिंह पुन ०६२ असार १६ गते अस्थायी दरबन्दीमा माविका गणित शिक्षक हुन ।
मुक्का प्रहार गरेपछि जोरासिंह भागेको र अर्को विहान १३ गते प्रहरी चौकी ईस्मामा गई गल्ती भएको र माफ पनि मागेको काँग्रेस, एमाले निकट शिक्षकहरुले बताएका छन् । “गल्ती जोरासिंहको मात्र छैन, यहाँ धेरै संडयन्त्र रचिएका छन्” बैद्य निकट मानिने स्रोतले भन्यो–“जोरासिंहलाई पिल्लरमा बानेर समेत पिटेका छन ।”
घटना पछि विद्यालय व्यवस्थापन समिति अध्यक्ष ढुण्डीराज अर्याल, शिक्षक, अभिभावकहरुको बैठक बसी शिक्षक पुनलाई कारबाही गर्न भनी जिल्ला शिक्षा कार्यालयमा निवेदन दिएको छ ।
पुनलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा एक हप्ता सम्म राखि अहिले छाडिएको छ । शिक्षक पुनलाई छुटाउन बैद्य निकटका केही व्यक्तिहरु पुगि छुटाएका हुन । पुन शुक्रबार देखि पुनः विद्यालयमा जान थालेको बताइएको छ ।
शिक्षक जोरा सिंह प्रहरी चौकीमा थुनिएपछि विद्यार्थीहरुले जोरा सिंह नभए सम्म विद्यालय सञ्चालन गर्न नदिने भन्दै तालाबन्दीको धम्की दिएपछि शिक्षक जोरासिंह पुन विद्यालयमा आएका छन् ।
विद्यार्थीहरुले जति रक्सी खाएपनि पढाउने बेलामा नखाएको र अध्यापन राम्रो गरेको भन्दै शिक्षक पुनलाई विद्यालयमा ल्याउन माग गरेको बुझिएको छ ।
घटना घटेपछि समितीमा बस्नुको औचित्य नभएको भन्दै एमाले निकट दुई पदाधिकारीले समितिबाट राजिनामा दिएको बुझिएको छ । राजिनामा दिनेमा शेर बहादुर क.सी र सुर्य बहादुर कार्की रहेका छन् ।
स्रोतका अनुसार शिक्षक पुनलाई हटाई काँग्रेस एमाले निकट नयाँ शिक्षक राख्नकै लागि सडयन्त्र गरिएको बताइएको छ । शिक्षा कार्यालयले भने अझै यो विषयमा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको छैन ।
– खबरबाणी डट कमबाट
प्रायोजित बिज्ञापन	@gulminewsयार्सागुम्बा – कहाँ पाइन्छ ? कसरि बन्छ ? के महतो छ ? तेजेन्द्र थापाको डकुमेन्ट्री (भिडिओ) https://t.co/05ZdGWJCcI #Gulminews #Gulmi50 mins agoRetweetमहेश बस्नेत गुल्मी आउँदै https://t.co/BT8pgJCcek #Gulminews #Gulmi5 hours agoRetweetतलको पानी माथी उक्लीएपछि… https://t.co/uxPrSvEk3K #Gulminews #Gulmi5 hours agoRetweetदलित वस्तीमा जाँड रक्सी झै–झगडा न्युन https://t.co/VA0mRVQGxl #Gulminews #Gulmi7 hours agoRetweetपहिलो पटक गुल्मीमा कपि उद्योग सञ्चालन https://t.co/vmnnk4bdu1 #Gulminews #Gulmi2 days agoRetweet अपराध खबर	यौन धन्दा गरिरहेका ११ जोडी प्रहरी द्धारा पक्राउ...	गुल्मीका एक युवाको बाटोमा कुटपिट, भिरमा शव फेला, हत्या अभियो...	शवको पहिचान : नेटाकी ८६ बर्षिय जसा श्रीस...	Gulminews Team	गुल्मीन्युज डट कम